मृत्युदण्ड सुनाइएका १४ नेपाली भन्छन्ः ‘बाँच्ने आस म‍र्यो
१० फाल्गुन २०७३
काठमाडौं, १० फागुन । जेलमा नेपाली अधिकारी भेट्न पुग्दा ‘मलाई फाँसी दे’ भन्दै ठुल्ठूलो स्वरले चिच्याउँछन् उनी । आँखाभरि आँसु पार्दै भन्छन्, ‘अब आस म‍रयो ।’ रोजगारका लागि मलेसिया पुगेका नुवाकोटका यी युवा १० वर्षदेखि जेलजीवन बिताइरहेका छन् । मलेसियाको संघीय अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका उनले पटक(पटक जीवनरक्षाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरे । तर, कुनै पहल नभएपछि बाँच्ने आस मारेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा… विस्तृत समाचार
इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, २४ को मृत्यु
२२ मङ्सिर २०७३
काठमाडौं, २२ मंसिर । इन्डोनेसियाको आचेह प्रान्तमा ६.४ म्याग्नेच्युडको शक्तिशाली भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ । कम्तीमा २४ जनाको मृत्यु भएको अधिकारीले जनाएका छन् । दर्जनौं भवन ध्वस्त भएका छन् । स्थानीयवासी घरबाट भागेर खुला स्थानमा पुगेका छन् । त्यहाँको मौसमसम्बन्धी निकायले सुनामीको जोखिम भने नरहेको जनाएको छ । विस्तृत समाचार
प्रवासी नेपाली मञ्च जापानमा नयाँ नेतृत्व
१५ मङ्सिर २०७३
काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रवासी नेपाली मञ्च जापानको २० औ राष्ट्रिय अधिवेशन समपन्न भएको छ । नेकपा (एमाले) स्थायी समिति सदस्य एवम प्रदेश नम्बर ४ का संयोजक किरण गुरुङले हालै जापानको टोकियोमा उदघाटन गरेको अधिवेशनमा पार्टीको दक्षिण पूर्वी एसिया संयोजक पार्टी बैकल्पीक केन्द्रीय सदस्य राजन राईसमेत सहभागी थिए । अधिवेशनले आगामी दुई वर्षका लागि महेन्द्र श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २७ सदस्यीय कार्यसमिति सर्वसम्मत चयन गरेको छ ।… विस्तृत समाचार
​जापानमा भूकम्प, सुनामीको चेतावनी
७ मङ्सिर २०७३
काठमाडौं, ७ मंसिर । जापानको फुकुसिमानजिक मंगलबार बिहान ७.४ म्याग्नेच्युडको भूकम्पको गएको छ । यसबाट सम्भावित सुनामीको चेतावनी दिइएको बीबीसीले जानकारी दिएको छ । स्थानीयवासी उच्च ठाउँको खोजीमा छन् भने केही घाइते भएको जनाइएको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहान ६ बजे भूकम्प गएको मेट्रोलजिकल एजेन्सीले जनाएको छ । विस्तृत समाचार
मलेसियामा नेपालीद्वारा ११४ विदेशीलाई नक्कली भिसा !
१० आश्विन २०७३
काठमाडौं, १० असोज । इस्लामिक स्टेट (आईएस) का सदस्यलाई फर्जी कागजपत्र बनाएर सघाएको आरोपमा मलेसियाबाट डिपोर्ट गरिएका नेपाली महेन्द्रजंग शाहले ११४ विदेशीलाई नक्कली भिसा लगाइदिएको देखिएको छ । १४ वर्षदेखि मलेसियामा होटल व्यवसायमा संलग्न रहेका शाहले नक्कली भिसा लगाएर ठगी गरेको भन्दै परेको उजुरीको अनुसन्धानमा उनले १५० जनालाई मलेसियाको नक्कली भिसा लगाएको र तीमध्ये १ सय १४ विदेशी नागरिक रहेको खुलेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत… विस्तृत समाचार
को हुन् मलेसियाबाट निकालिएका नेपाली ?
७ आश्विन २०७३
काठमाडौं, ७ असोज । अन्तर्रा्ष्ट्रिय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस)लाई सहयोग गरेको आरोपमा मलेसियामा रहेका एक नेपाली नागरिक पक्राउ परेका छन् । होटल व्यवसायमा संलग्न ३८ वर्षीय नेपाली नागरिक आईएसको सहयोगीको आरोपमा पक्राउ गरी देश निकाला गरेको मलेसियाका प्रहरी प्रमुखलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्रा्ष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ । पक्राउ परी डिपोर्ट गरिएको भनिएका नेपाली नागरिकको नाम खुलाइएको छैन ।… विस्तृत समाचार
आगलागी हुँदा २३ को मृत्यु, ७० घाइते
२६ भाद्र २०७३
काठमाडौं, २६ भदौ । बंगलादेशमा प्याकेजिङ कारखानामा आगलागी हुँदा कम्तीमा २३ जनाको मृत्यु भएको छ । राजधानी ढाकाको उत्तरी टोङगीस्थित औद्योगिक प्रतिष्ठानमा भएको आगलागीमा उनीहरुको ज्यान गएको हो । ७० जना गम्भीर घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार उक्त समय मेसिन अपरेटर र सुरक्षा गार्ड गरी १०० जना कामदार थिए । विस्तृत समाचार
२३ भाद्र २०७३
उनी सिंगापुरे लाहुरेमा पहिलो लेखक रहेछन् । तर, आफूलाई लेखक ठान्दैनन् । ‘म आफूलाई लेखक हुँ भन्ने नै लाग्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘भोगाइलाई किताबमा उतारेको मात्र हुँ ।’ –सचित राई काठमाडौं । पुग–नपुग १८ वर्षमा भर्ती । २७ वर्ष नोकरी । ४५ वर्षको उमेरमा अवकाश । त्यसपछि लेखन र अनुसन्धान । झट्ट सुन्दा कुनै लाहुरेको जीवन यात्राजस्तो । लेखन र अनुसन्धान भन्दा होइन कि जस्तो पनि… विस्तृत समाचार
​जनसम्पर्क समिति जापानको सभापतिमा कँडेल निर्वाचित
१४ भाद्र २०७३
नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानको छैटौं अधिवेशनबाट सभापतिमा दण्डपाणि कँडेल (डीपी) निर्वाचित भएका छन् । सभापति कँडेलसहित २३ सदस्यीय जनसम्पर्क समिति निर्वाचित भएको घोषणा टोकियोमा गरिएको छ । जनसम्पर्क समिति जापानको सन् २०१६/८ /२१ को निर्वाचन पश्चात् रोकिएको मतगणना कार्यक्रम २०१६/८/२८ तारिखमा टोकियोमा सम्पन्न गरिएको थियो । मतगणनामा कँडेल ३४६ मत ल्याई सभापतिमा बिजयी भएको निर्वाचन समिति सदस्य मुक्तिराम खनाल ‘विनोद’ ले जानकारी दिएका… विस्तृत समाचार
जापानमा शरणार्थी बन्न १८ सय नेपालीले निवेदन दिए
१२ भाद्र २०७३
काठमाडौं, १२ भदौ । जापानको सोफिया युनिभर्सिटीकी सहायक प्राध्यापक मासाको तानका त्यहाँ रहेका नेपालीबारे एउटा तंथ्याक सुनेर सुरुमा अचम्म परिन् । जब उनले उक्त तथ्यको प्रमाणिकता बुझिन्, मन भरंग भयो । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम नजिकबाट बुझेकी तानका छक्क पर्नुको कारण थियो, द्वन्द्व सकिएपछिका वर्षमा पनि गैरकानुनी रुपमा जापान बस्ने र शरणार्थीका निम्ति आवेदन दिनेको संख्या घटेको छैन । उनका अनुसार जापानमा १८ सय नेपालीले शरणार्थी… विस्तृत समाचार